FANJA RAZAH – MPANORATRA – Blaogin'i Voniary
Fampivoaran-tena sy maha-Malagasy
Izany ka Malagasy
FANJA RAZAH – MPANORATRA
Hanolotra antsan-tononkalo « FOHA FOTA-MANDRY » ny zoma 26 Aogositra izao amin’ny 4 ora tolakandro i Fanja Razah sy i Kaja ao amin’ny Tahala Rarihasina Analakely. Eto dia ifampizara sombintsombiny amin’ny fiainany RAZAFIMAMONJY Georges Eugène Fanja mba ahafantarantsika azy bebe kokoa.
NY FIANARANA NORANTOVIKO
Noho ny fankamamiako ny soatoavina Malagasy dia nandalina manokana momba izany aho ka nanaraka ny sampam-pampianarana teny sy lahabolana ary riba Malagasy rehefa teny Ambohitsaina. Anisan’ny mpikambana mpanorina ny Mpizaka Stelarima (MPIangaly ZAvaKAnto / Sampana TEny sy LAhabolana ary RIba Malagasy tao amin’ny FLSH Antananarivo aho. Amiko manokana anefa, tsy dia misy dikany ny fanasokajiana ny olona araka ny diplaoma ananany. Fototra enti-miainga ihany ireny fa ny fahaizanao mandalina sy mikaroka izay talentanao no maha-ianao anao.
NY ASA SORATRO
Nanomboka ny taona 1986 aho no nandrakitra an-tsoratra ny tononkalo noforonina. Fiangaliko indrindra ny tononkalo, tantara fandefa amin’ny onjam-peo, sombintantara ary tantara foronina. Raha ny amin’ny tononkalo dia tsongaiko manokana ireto : « Iloka e ! Iloka ! », « Tsingeringerina », « Angalikanto », « Ranitra », « Tompo ô ! honony ! », « Izay resy mandro an’ava », « Dada », « Fa nisoko » ary « Mama » izay ikaloiko ny fitiavan-tanindrazana, ny fahafahana, ny kanto sy ny alahelo. Ny tantara fandefa amin’ny onjam-peo moa dia misy ny : « adidy sa valifaty », « Aroriaka », « Takarivam-piainan’i Neny », « Mody tsy fanina », Levenam-bola ve » sy ny maro hafa tsy voatanisa. Ny tantara foronina kosa, izay mitondra ny lohateny hoe : « Hofak’ondry » dia nahazoana Loka fampirisihana tamin’ny fifaninanana « Loka Nirhy Lanto – Rindrambolana sy koloteny » tamin’ny 2006.
Izaho dia mbola tsy niala teto Madagasikara hatrizay. Azo lazaina fa mahafantatra tsara ny tsiron’ny tany sy mianoka tanteraka ny andon’ny lanitra eto amin’ity tanindrazako ity aho. Mampirehareha ahy izany satria toy ny hoe ninono tamin’ny nonon-dreny tsy misy fangarony aho. Noho izany, miezaka hatrany aho miaina ny maha-Malagasy ahy ary indrindra mampihatra izany eo amin’ny fiainana andavanandro. Amin’ny Malagasy, ny maha-olona no ambony fa tsy ny fahaizana satria manana ny hasiny ny olona tsirairay. Izany no fototry ny fifanajana sy ny fihavanana.
NY TENY MANENTANA AHY
Ny Ohabolana Malagasy tena ankafiziko dia ny hoe « Ny ana-dray aman-dreny toy ny tsipak’ombalahy, raha mahavoa mahafaty, raha tsy mahavoa mahafanina ». Anisan’ny teny entiko miaina koa ny hoe « Ataovy toy ny voankazao an’ala, ny mamy atelomy, ny mangidy aloavy ». Mahafehy izany rehetra izany ny hoe « Soa fianatsa ro mahavokatsa ro mahavokatsa ».
NY FANIRIAKO HO AN’I MADAGASIKARA
Ny olona tsirairay dia miaina ho an’ny tenany sy ny fiarahamonina. Samy mikendry ny tsara avokoa na iza na iza. Sarotra anefa ny manakatra ny tonga lafatra. Izay indrindra no ilàna ny marimaritra iraisana rehefa ao anatin’ny fahasamihafan-kevitra. Atambatry ny soa iombonana manko isika Malagasy dia ny fikatsahana ny ahatsara ity tanindrazantsika ity. Rehefa teraka ao anatin’izay ny fihavanana dia zary foto-pahavanonana ho an’ny taranaka ny fiaraha-mientana. Ka ny faniriako dia ny mba hifandrary hasina ny Malagasy rehetra.
Publié par voniary
Voir tous les articles par voniary
fanja razafimamonjy, fanja razah, maha-malagasy, malagasy, mpanoratra malagasy, tononkalo malagasy
FANJA RAZAH : « TSY TOKONY ANDREFESANA NY MAHA-IZY AZY NY TSIRAIRAY NY FAHAIZANA TENY FRANTSAY »
REHEFA ANY AMBANIVOHITRA (Tapany I)
Soraty eto ny adiresy mailakao mba anarahanao ny Vaovaon'ny Blaogin'i Voniary
Boky hipoka lesona ity, ho an’izay maniry ny hivoatra: voafehy ao avokoa ny fampivoaran-tena, ny fahaiza-miaina, ny fampivelaram-panahy, ny psikolojia ary ny fanabeazana sy ny fitaizana.
VOAMBOLANA MOMBA NY TSENAM-BARO-PANJAKANA (MARCHÉ PUBLIC) indray no atolotro anareo anio.
Ravoravo ny fo ❤😍nahita anareo marobe nandray anjara tamin'ilay lalao faha-5 taonan'ny Blaogin'i Voniary. Fa ny tena nahafinaritra dia ny nahita ny teny manentana anareo tsirairay avy. Mahavelombolo satria fahazavana ✨ isika tsirairay avy, mazava sy mamiratra. Rehefa manazava ✨✨✨ny manodidina antsika isika dia mifindra sy miparitaka izany fahazavana izany. Rehefa miitatra izany dia tsy maintsy hazava ihany i Madagasikara ary farany izao tontolo izao.
Boky PDF raiso an-tanana ny fiainanao (any ivelany)
Boky PDF raiso an-tanana ny fiainanao (eto Madagasikara)
2 TAONA – BLAOGIN’I VONIARY
033 73 477 93